သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ငြိမ်နေရခြင်းအကြောင်း
နားပါဦးမယ်ပြောပြီးမှ စာက ပိုရေးချင်တော့ အခက်တွေ့ရတဲ့အခါ ရှိဖူးတယ်။
ပြောသာ ပြောရတာပါ၊ စာရေးတာ အဲဒီလောက် မလွယ်ပါဘူးလို့ သိပါတယ်။
မလေး လက်ရာ ဖတ်ချင်လို့ပါ။
Comment by အပြုံးပန်း — March 14, 2010 @ 3:07 am |Edit This
(အခုလိုစာမျိုးလေးတွေ ရေးလည်းရသားနဲ့….။ ပျောက်နေရင် ခဏခဏလာအော်မည်….။ ဒါဘာဘဲ……..)
Comment by ဏီလင်းညို — March 14, 2010 @ 3:11 am |Edit This
ဒီက.. ကားကြီးများ မီးလောက်ပေါက်ကွဲသွားလားလို့ တထိတ်ထိတ်နဲ့ဖတ်နေရတာ..။
သြော်.. မိဘတွေ မိဘတွေ..။
Comment by Evergreen Phyo — March 14, 2010 @ 3:30 am |Edit This
မလေးရေ…အဲဒါ တကယ် ခဏနားမယ်ဆို ရေးစရာတွေ ထွက်လာတတ်တယ်…တူတူပဲ တူတူပဲ….:)
Comment by ချစ်ကြည်အေး — March 14, 2010 @ 3:58 am |Edit This
မလေးပိုစ့်လေး ဖတ်နေရင်းနဲ့ စစချင်း ရီချင်နေတာ။ ဟုတ်ပ…… မီးတိုင်ကြီး ပြန်ကြည့်ပြီး ရီချင်သွားတာ။ နောက်တော့မှ အောက်က ကားခိုးတာလေး ဖတ်ပြီး ကလေးလေးကိုလည်း သနားသွားတယ်။ သူခိုးကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်။ တော်ပါသေးရဲ့ …
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — March 14, 2010 @ 4:38 am |Edit This
Comment by kom — March 14, 2010 @ 5:15 am |Edit This
Haa Haa, thanks for sharing the recent happenings in town, friend :D
Comment by Angel Eyes — March 14, 2010 @ 6:25 am |Edit This
Comment by rose of sharon — March 14, 2010 @ 8:20 am |Edit This
စာရေးနားမယ်လို့တော့ မပြောလိုက်ပါနဲ့ မလေးရယ်။ ရေးချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါလေး ထကောက်ရေးပါဦးနော်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မလေးစာအုပ်တော့အပိုင်ရထားလို့ ကျေနပ်တယ်။ မလေးလက်မှတ်လေးနဲ့ဆို သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့။း)
Comment by ဇွန်မိုးစက် — March 14, 2010 @ 8:43 am |Edit This
မအိမ့်ချမ်းမြေ့စာလာဖတ်ပါတယ်။
ကားသူခိုး ကလဲ အတော်စေတနာ ကောင်းတယ်ပြောရမလား။ ကလေး ကို ဘာမှ မလုပ်သွားတာ ကံကောင်းတယ်နော်။
ကလေးမိဘများလဲ တယ်လဲ မစဉ်းစားတတ်ကြပါလားနော်။ တကယ်ဆို အဲလောက်ငယ်ငယ်ရင်သွေးမပြောနဲ့ လေးငါး ခြောက်နှစ်ကလေးတွေ တောင်မှ နိုးပြီးခေါ်သွားသင့်တယ်။
ညနေက အိမ်သူ နဲ့ စကားပြောကြတုန်း ရန်ကုန် ဂမုန်းပွင့် ကုန်တိုက်ထဲမယ် ကလေး တွေ မိဘ နဲ့ကွဲကွဲသွားလို့ဟိုကောင်တာနား ရပ်ငို ဒီကောင်တာနား ရပ်ပြီး ငို နေကြတာ စူပါမားကတ် က
မိုက်ခရိုဖုန်း နဲ့ ကလေးမိဘတွေ ကို သြော်ပေးနေရတယ်။
ငယ်ငယ်ကတော့ ဦးလာဘ ကြီးသာ ရှိယင် အင်း…….မတွေးရဲစရာပဲ။
မအိမ့်ချမ်းမြေ့စာရေးတာတော့ မရပ်ပါနဲ့ ဗျာ။ မအားလဲ အားတဲ့ အချိန်လေး တော့ ရေးစေချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ယင် စာအုပ်သွားရှာဝယ်ဦးမယ်ဗျ။
Comment by မောင်မောင် — March 14, 2010 @ 11:40 am |Edit This
တော်ရုံဆို ကလေးကို တစ်နေနေရာပစ်ချခဲ့မလား မသိဘူးနော်..
Comment by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) — March 14, 2010 @ 12:49 pm |Edit This
ပုံရိပ်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ နားမယ်လို့ ပြောရလောက်အောင်လည်း ငြိမ်မနေချင်။ စာရေးကလည်း ကျဲ။ အားတဲ့အခါ ရေးပေါ့ မလေးရေ။
Comment byုပုံရိပ် — March 14, 2010 @ 4:20 pm |Edit This
မလေးရေ ဒီမှာလည်း ပို့စ်အဖြစ် ရောက်မလားတဲ့ ဟိုတစ ဒီတစတွေနဲ့
Comment by S-C — March 14, 2010 @ 9:05 pm |Edit This
ညီမရဲ့ ဆောက်လက်စ အိမ်လေးကို လာလည်ပေးတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ညီမ ဘလောခ့်တွေနဲ့ မရင်းနှီးသေးတဲ့ အချိန်ကတည်းက မလေးရဲ့ ချစ်သူ့အိမ်လေးကို ဖူးငုံမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖတ်ဖူးပြီး စွဲလမ်းခဲ့ရတာ။ ဒါပေမယ့် မလေးမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ ဘလောခ့်တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာပြီး အိမ်လည်တတ်တော့မှ မလေးဟာ ချစ်သူ့အိမ်လေးကိုဖန်တီးသူမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အလုပ်မအားလို့ စာတွေမရေးနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် မလေးရေးလာမယ့်စာလေးတွေကို မျှော်နေမိမှာပါ။ ရေးချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါ ဆက်ရေးပါဦးနော်။
Comment by ကေသရီ — March 15, 2010 @ 5:29 am |Edit This
Comment by တောသားလေး — March 15, 2010 @ 6:30 pm |Edit This
မလေးအိမ့် ..း)
ညီမတော့ နားမယ်မပြောတော့လို့လားမသိ နားဖြစ်နေပါတယ်..
Comment by shwunmi — March 16, 2010 @ 1:07 pm |Edit This
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်မရေးနိုင်ဘူးထင်နေတာ. မလေးပါ ဒီကလပ်ထဲဝင်လာပြီကိုး
အင်း. ကားသူခိုးနဲ့ကလေးဖြစ်ပုံကလည်း ရယ်ရတယ်. ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ ဘယ်သွားသွားကိုယ့်ကလေးကို ခေါ်သွားမှာ.
အခုလည်းဖက်အိပ်တယ်. ခေါင်းအုံးကို….း))))
မတွေ့ရတာကြာပြီဗျာ.. ရေးနိုင်သလောက်လေးတွေ တင်ပါဦး. နောက်တစ်ပတ်အတွင်း ပို့်စ်အသစ်မတင်ရင် မလေးရဲ့ ချစ်သူ့အိမ် စာစုလေးကို ကျွန်တော် ဟာသလုပ်ပြီး ပြန်ပြင်ရေးပစ်လိုက်မယ်. ဘာမှတ်လဲ. :D
Comment by Yan — March 16, 2010 @ 6:54 pm |Edit This
နားမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးရေးလို့ထွက်လာ တတ်တာ ဟုတ်တယ်နော် မမအိမ့်… အရင်နေ့တွေကလည်း အသစ်မရှိပေမယ့် ခဏခဏအဟောင်းတွေ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကားသူခိုးဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရတာ ရင်ထိတ်လိုက်တာ မရယ်။ တော်သေးတယ် ခိုးတဲ့သူက စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူမို့လို့နော်။ ဒါလေးဖတ်ပြီး လူတွေမှာ (စိတ်ဖောက်ပြန်နေသူက လွဲရင်) ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေခံလေးတော့ ရှိကြတာချည်းပါပဲလို့ တွေးမိပါတယ်…
Comment by ရွှေပြည်သူ — March 17, 2010 @ 6:23 pm |Edit This
မဖတ်ရသေးတဲ့ အကြွေးလေးတွေ အားရပါးရဆပ်ရင်း
မြန်မာပြည်ပြန် လက်ဆောင်လာဖပးတာပါး))
အညာလက်ဆောင်ဆိုတော့ လက္ဘက်နဲ့ ပဲကြမ်း မြေပဲလှော်ပေါ့နော်းD
Comment by နှင်းဟေမာ — March 18, 2010 @ 8:18 pm |Edit This
မလေး…. ဘာမှမရေးဖြစ်တာ မလေး တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးဗျ။
ကိုရန်အောင်လည်း ပါတယ် ဆိုပဲ။
ကျွန်တော်လည်း အတူတူ ပါပဲ… ဟတ် ဟတ်။
တွဲလောင်းကျနေတဲ့ အိမ့်ချမ်းမြေ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးက ကဗျာဆန်တယ်။
ခေါင်းနဲ့မလွတ်လို့ တိုက်မိရင် ဆည်းလည်းလို အသံမြည်လေမလားပဲ။
Comment by နောင်တော် — March 19, 2010 @ 4:18 am |Edit This
စိတ်ပါတဲ့အခါရေးပါ မလေးရယ်.. အားမနာပါနဲ့။ အားလုံးက နားလည်ကြပါတယ်။ ကျွန်မဆို reader ထဲထည့်ထားတယ်.. မလေး အသစ်တင်မှ ရောက်ဖြစ်တာပေါ့.။ အဆင်ပြေတယ်..:D .. သူခိုးက တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သူခိုးပဲနော်………. :) ..
Comment by winkabar — March 19, 2010 @ 10:25 am |Edit This
ကားထဲမှာ ကလေးနဲ့ အတူအိပ်တော့ လူပါ အခိုးခံရမှာပေါ့..ဟီး..ဟီး
Comment by ဒီဝိုင်း — March 21, 2010 @ 12:24 am |Edit This
အပေါ်က ဒီဝိုင်း ပြောတာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါသည် :D :D
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — March 22, 2010 @ 6:26 am |Edit This
နားနားပြီးရေး…. အမောပြေမှရေး ….။ အယ် သိတော့ပါဘူး နက်လာမသုံးတာကြာတော့ အစ်မပို့စ်တွေ အများကြီးတက်နေပြီထင်တာ ခုတော့ ငြိမ်နေတာကိုး အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မရေ ခလေးကိုသတိထားနော်း)
Comment by မောင်မျိုး — March 23, 2010 @ 4:57 am |Edit This
Angel Eyes …. သူငယ်ချင်းဘယ်ပျောက်နေသတုန်း???
Evergreen Phyo…. သူခိုးက ဘဲ ကို ခိုးတာ မဟုတ်ဘူးလေ..
winkabar ..အင်းးးးးးး ညီမလေးက သူခိုးကို တော်တော်လေးကို စိတ်ဝင်စားသွားတာကိုး..
ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား & ဒီဝိုင်း .. သြော်.. နာမယ်မှာ ဒဒွေးနဲ့စသူများဟာ တိုက်ဆိုင်ထူးဆန်းလွန်းစွာ လူပါ အခိုးခံချင်ကြတာကို လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို သိလိုက်ရပါကလား။
ကွန့်မင့်လာရေးကြသော ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံး…အပြုံးပန်း၊ ဏီလင်းညို၊ ချစ်ကြည်အေး၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ မခင်ဦးမေ၊ မရိုစ်၊ ဇွန်မိုးစက်၊ ကိုမောင်မောင်၊ ချော၊ ပုံရိပ်၊ မသီတာ၊ ကေသရီ၊ တောသားလေး၊ ရွှမ်းမီ၊ ကိုရန်၊ ရွှေပြည်သူ၊ နှင်းဟေမာ၊ ၀င်္ကပါ၊ မောင်မျိုး.. ဒီလိုပဲ ဘလောဂ်နားတယ်ဆိုပြီး တားမရသောဝါသနာကို အကြောင်းပြလို့ စာတွေကြိုကြားကြိုကြားရေးသွားပါမယ်၊ မလေးကို မေ့မသွားကြပါနဲ့လို့။ :)
Comment by မလေး — March 23, 2010 @ 11:41 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:43 PM